ပရိသတ်ရဲ့မျှော်လင့်စောင့်စားမှုအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ 2022 မှာထွက်ရှိမယ့် K-Dramas6ခု - MyStyle Myanmar
2022 မှာထွက်ရှိမယ့် K-Drama တွေကတော့ ဇာတ်လမ်းကောင်းတာ မကောင်းတာထက် တွဲဖက်ပေးထားတဲ့ မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေက အရမ်းမိုက်နေတာပါပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း 2022 မှာထွက်မယ့် Drama တော်တော်များများကို ပရိသတ်တွေ အရမ်းမျှော်နေရတာပါ။ အဲ့ဒီထဲကမှ မျှော်လင့်စောင့်စားမှု အများဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ ဖော်ပြခြင်းခံထားရတဲ့ 2022 မှာထွက်ရှိမယ့် K-Dramas6ခုကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
JTBC ရုပ်သံလိုင်းကနေ ထုတ်လွှင့်မယ့် Drama ဖြစ်ပြီး မင်းသားချော Song Joong-Ki နဲ့ မင်းသမီး Yoon Hyun-Woo တို့က ပါဝင်ထားပါတယ်။
tvN ရုပ်သံလိုင်းကနေထုတ်လွှင့်မယ့် Drama ဖြစ်ပြီး Kim Tae Ri, Nam Joo Hyuk, WJSN member Bona နဲ့ တခြားသော အနုပညာရှင်များစွာ ပါဝင်ထားပါတယ်။ Nam Joo Hyuk ရဲ့ ပရိတ်တွေအတွက်တော့ မဖြစ်မနေစောင့်ကြည့်ရမယ့် Drama လေးပါပဲ။
tvN ရုပ်သံလိုင်းကနေထုတ်လွှင့်မယ့် Drama ဖြစ်ပြီး ပါဝင်မယ့် မင်းသား၊ မင်းသမီးကတော့ တကယ့်အမိုက်စားတွေပါပဲ။ မိန်းကလေးတိုင်းအသည်းစွဲဖြစ်တဲ့ Lee Jong Suk နဲ့ ပရိသတ်တွေချစ်ရတဲ့ Girls’ Generation member Yoona တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
OCN ရုပ်သံလိုင်းကနေထုတ်လွှင့်မယ့် Drama ဖြစ်ပါတယ်။ Jeju ကျွန်းမှာဇာတ်အိမ်တည်ပြီးရိုက်မယ့် Island Drama ထဲမှာတော့ Kim Nam Gil, Lee Da Hee, Sung Joon နဲ့ ASTRO member Cha Eun Woo တို့ ပါဝင်ထားပါတယ်။
SBS ရုပ်သံလိုင်းကနေထုတ်လွှင့်မယ့် Why Oh Soo Jae? Drama ထဲမှာတော့ Seo Hyun Jin, Hwang In Yeop နဲ့ တခြားအနုပညာရှင်များစွာပါဝင်ထားပါတယ်။ Hwang In Yeop ကို ဒီတစ်ခါမှာတော့ Main lead အဖြစ်နဲ့ မြင်တွေ့ရတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
KBS2 ရုပ်သံလိုင်းကနေထုတ်လွှင့်မယ့် Crazy Love Drama မှာတော့ Kim Jae Wook နဲ့ Krystal (Lee Shin Ah) တို့က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ Kim Jae Wook ရဲ့ Drama ကို မျှော်နေကြတဲ့သူတွေနဲ့ Krystal ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ ဒီ Drama လေးကို မျှော်ရမှာပါပဲ။
MyStyle Myanmar2021-12-28T09:35:01+06:30November 18th, 2021|Celebrity News, Entertainment, Movie|
အကောင်းဆုံး Dancers များအဖြစ်နဲ့ Fan တွေ Vote လုပ်ပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ K-Pop Male Idols 10 ယောက်
ပညာရေးခရီးကို ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေအတွက် စိတ်အားတက်စရာ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတချို့
နှင်းဆီပန်း လက်ဆောင်ပေးတတ်သူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ နှင်းဆီအရောင် အဓိပ္ပာယ်များ
ကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်တို့ မအောင်မြင်သေးတဲ့အချိန်တုန်းက လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့အလုပ်များ
လူကြိုက်များလှတဲ့ အချမ်းသာဆုံး စာရင်းဝင် K-Pop စတား ၅ ဦး
2022 ရဲ့နှစ်ဝက်အတွင်း Google Worldwide မှာ ရှာဖွေမှုအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ K-pop Idols 10 ယောက်
Hollywood ရုပ်ရှင်တွေထဲက ဒါရိုက်တာတွေရဲ့ လှည့်ကွက်များ
K-Drama ချစ်သူတိုင်းကြည့်သင့်တဲ့ Ongoing K-Drama (8) ခု
June လအတွက် ရောင်အားအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Female K-pop Group 10 ခု
Disney မင်းသမီးလေးတွေသာ ကိုယ်ဝန်လွယ်ရပြီး ကလေးမေမေတွေ ဖြစ်ခဲ့ရင်….
တစ်ယောက်တည်း ခရီးသွားခြင်းရဲ့ လှပမှု ပုံရိပ်တွေနဲ့ အကြံပေးချက် (၅) ခု